Học Viện Tóc Phong Cách Tây
Sigurna kupnja Brza dostava Cijena: 39kn
Ured UNICEF-a za Hrvatsku | UNICEF Hrvatska
Donirajte i pomozite najranjivijoj djeci. Jer svako dijete je dragocjeno!
Genius site allows you to shop for your family back in the Philippines! Just three easy steps: Select product on your phone Family receives code on their phone Your family uses code to shop in PH! You worked hard for your money. Make sure it goes to the things you care about. Try it out for free http://bit.ly/2MpV4SX
Situated inapopular residential area to the North of Lincoln City Centre, this three bedroom semi detached house would make an ideal first time buy or investment opportunity.
กางเกงกระชับ เสื้อกระชับ ชุดสลิม ส่งฟรี เก็บเงินปลายทาง
Каско - плати коли їдеш
Dott.ssa Annarita Di Sarno - Psicologa
Sabia queaOMS declarou guerra ao HPVetemamissão de eliminar o Cancro do Colo do Útero até 2030? Sabia mais na notícia
Учебен център DeviseExpert в София - курсове по програмиране
Wedding Rental Company | Denver Wedding Rental Company | United States
AIT Computer Co.,Ltd မှ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိထားသော Myanmar E-learning Training DVDs ပို့ချချက် (၁၄၀) ============= သင်တန်း တတ်စရာမလိုဘဲ မိမိဖာသာ Self-Study လေ့လာပြီး ကွန်ပျူတာ အိုင်တီနည်းပညာနဲ့ စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှု ပညာရပ်များ သင်ယူနိုင်စေဖို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး IT E-Learning Company ဖြစ်တဲ့ AIT Computer Co.,Ltd မှ မြန်မာလို ပို့ချချက် DVD Video File များကို အိမ်တိုင်ရာရောက် ပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီ။ တစ်ပုံချင်းစီ ထောက်ပြီး ပါဝင်တဲ့ အသေးစိတ်သင်ခန်းစာတွေကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ✅ Computer Basic Series ✅ Video Editing Series ✅ System & Network Engineering Series ✅ Programming Series ✅ Web Development Series ✅ စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှု MBA Series များကို ထုတ်ဝေဖြန့်ချိထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ MBA Series Myanmar Training DVDs ➖➖➖➖➖➖ မြန်မာနိုင်ငံမှ SME စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အလျှင်အမြန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ AIT Computer Co.,Ltd မှ MBA Series (Myanmar Video Training DVD) ပို့ချချက် ဘာသာရပ်တွေကို တစ်ဘာသာလျှင် မြန်မာကျပ်ငွေ တစ်သောင်းခွဲ (၁၅၀၀၀) ကျပ်တည်းနဲ့ ဝယ်ယူလေ့လာနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ MBA သင်ရိုးကို မြန်မာလို အရှင်းလင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကိုဝေဖြိုးအောင် (AIT Computer) မှ ကိုယ်တိုင် သင်ကြားပို့ချထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထွက်ရှိပြီး MBA Series သင်ခန်းစာ ဘာသာရပ်များ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #1 - Marketing Management #2 - Facebook Digital Marketing 2020 #3 - Social Media Marketing #4 - Excel for Accounting #5 - Computerized Accounting #6 - Accounting Management for MBA #7 - Finance for SME #8 - Microsoft Project 2019 #9 - Project Management for MBA Computer Basic Series By AIT Computer ============== ကွန်ပျူတာ အခြေခံနည်းပညာများကို သင်တန်းတတ်စရာမလိုဘဲ မိမိဖာသာ Self-Study လေ့လာချင်သူများအတွက် AIT Computer မှ ထုတ်ဝေဖြန့်ချိထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပုံချင်းစီထောက်ပြီး ပါဝင်တဲ့ သင်ခန်းစာ အသေးစိတ်တွေကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ✅ Word, Excel, PowerPoint သင်ယူချင်သူများအတွက် -> လုပ်ငန်းခွင်ဝင် ကွန်ပျူတာ ✅ အင်တာနက် အသုံးပြုမှု အသေးစိတ် သင်ယူချင်သများအတွက် -> ICT Foundation ✅ စာစီစာရိုက် သင်ယူချင်သူများအတွက် -> DTP ✅ ဓာတ်ပုံပြုပြင် သင်ယူချင်သူများအတွက် -> Adobe PhotoShop ✅ ကွန်ပျူတာ စက်ပြင်ဘာသာရပ် သင်ယူချင်သူများအတွက် -> A+ System Administration ✅ အိမ်ပုံ၊ တိုက်ပုံ စသည့် Engineering Drawing ဆွဲချင်သူများအတွက် -> AutoCAD 2D 3D Video Editing Series ------------------- တစ်ခွေချင်းစီမှာ ပါဝင်တဲ့ သင်ကြားပို့ချချတ် အသေးစိတ်တွေကို တစ်ပုံချင်းစီနှိပ်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ Social Media အသုံးများတဲ့ ယနေ့ခေတ်မှာ အလွန်အသုံးဝင်သည့် Video Editing နည်းပညာများကို သင်တန်းမတတ်ဘဲ မိမိဖာသာ အိမ်မှာ Self-Study လေ့လာပြီး လက်စွမ်းပြနိုင်ဖို့ AIT Computer မှ ထုတ်ဝေတဲ့ Video Editing ခွေတွေကို အလွယ်တကူ ဝယ်ယူလေ့လာနိုင်ပါပြီ။ Adobe Premiere CC2017 မှာဆိုရင် ✅ Step By Step သင်ကြားပို့ချထားတဲ့ မြန်မာ E-Learning Video ဖိုင် (၁၅၀) ကျော် ပါဝင်ပါသည်။ ✅ သင်ခန်းစာများကို မြန်မာလို ရှင်းလင်း ရေးသား ပို့ချထားတဲ့ PDF e-Book (၄) အုပ် ပါဝင်ပါသည်။ ✅ ဘာသာရပ် သင်ကြားရေးမှာ အသုံးပြုထားတဲ့ Software And Plugin Setup (၁၂) ခု ပါဝင်ပါသည်။ ✅ မြန်မာ Training ဗွီဒီယို၊ PDF e-Book, Software Setup စတဲ့ Video Editing Data များ စုစည်း ထည့်သွင်းထားတဲ့ DVD (၅) ချပ် ပါဝင်ပါသည်။ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Adobe Premiere CS6 မှာဆိုရင် ✅ Step By Step သင်ကြားပို့ချထားတဲ့ မြန်မာ E-Learning Video ဖိုင် (၁၂၀) ကျော် ပါဝင်ပါသည်။ ✅ သင်ခန်းစာများကို မြန်မာလို ရှင်းလင်း ရေးသား ပို့ချထားတဲ့ PDF e-Book (၄) အုပ် ပါဝင်ပါသည်။ ✅ ဘာသာရပ် သင်ကြားရေးမှာ အသုံးပြုထားတဲ့ Software And Plugin Setup (၁၂) ခု ပါဝင်ပါသည်။ ✅ မြန်မာ Training ဗွီဒီယို၊ PDF e-Book, Software Setup စတဲ့ Video Editing Data များ စုစည်း ထည့်သွင်းထားတဲ့ DVD (၅) ချပ် ပါဝင်ပါသည်။ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Adobe After Effect CC မှာဆိုရင် ✅ AE လေ့လာသူများဟာ လေ့လာရင် လမ်းပျောက်သွားတက်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမဖြစ်စေရန် AIT Computer Video Editing Group ကနေ မြန်မာလို သင်ကြားပို့ချလိုက်တဲ့ Trainingကတော့ AE အခြေခံဖြစ်တဲ့ Effect , Transisation Text & Animation အသုံးပြုနည်းမှစပြီး Export ထုတ်လုပ်သည်အထိ Step By Step သင်ကြားပြသထားပါတယ်။ ✅ AE ဟာ Composite Software ဖြစ်တဲ့အတွက် Edit Software ဖြစ်တဲ့ Premiere ဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနည်း။ ✅ 3D Camera ကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုခြင်း။ ✅ Motion Track နှင့် Camera Track များကို ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုခြင်း နှင့် Matt များကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုခြင်း။ ✅ Text Layout များဖန်တီးခြင်း။ ✅ Background နောက်ခံမတူသော အရာများကိုရှင်းထုတ်၍ နောက်ခံအသစ် ပ
Red Hot Pizza | Доставка на Храна за Дома или Офиса
OPORTUNIDADE ÚNICA!!! Você não pode deixar de adquirir uma peça linda para sua casa por um preço incrível Corre que temos apenas5peças na promoção Ostra de 1.50cm de R$1.700 POR APENAS R$990 ‍♀‍♀‍♀‍♀ 19.97411-6050 Jean ✅ Whats: https://bit.ly/2k5hP1c ☎19.3012-2800 Loja Rua Emílio Leão Brambila 134, Jardim Santana
Pierre Richard Touze
Ιωαννίδης Δύναμη Αξιοπιστίας Αμπελόκηποι-Μενεμένη 2019-2023
يمكنك الأن حجز وحدتك في BOHO ElSokhna عن طريق تحويل بنكي بمقدم بعد شهر من التعاقد و تقسيط يصل الي 8 سنوات مساحات تبدأ من 100 متر و اسعار تبدأ من 1,653,500 جنية لمزيد من المعلومات اتصل بنا علي 19526